Kudzokorora matafura Discover ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
TIwe unotaura nezvekuwedzera. Zvinogona kuva dzidza zviri nyore kupfuura zvaunofunga. Zvese zvinhu inyaya yekuvaziva, kuzvidzokorora uye nekuzviisa mumusoro uye ivo vachazogara newe kwehupenyu hwako hwese. Zvitore!
Kanganiso: kuona kunogona kunge kusipo d0241853ho
La Tafura yekuwedzeredza icho chinhu icho iwe chaunoshandisa kazhinji kazhinji muhupenyu hwako hwese. Iwe hauzombokanganwa kana iwe ukadzidza kubva paudiki. Kana tikaramba tichidzokorora imwe neimwe yematafura, mumaawa mashoma iwe unozogona kuongorora kuti iwe watove nyanzvi nhamba dzose kuti uwedzere.
Uri kudzidza matafura here? Tinokurudzira chinyorwa chedu: maitiro ekudzidza matafura ekuwedzera. Rangarira izvo matafura ekuwedzera kubva 1 kusvika 10 akakosha mumasvomhu. Ukasazviziva nekukurumidza, uchave nematambudziko mune ramangwana kana zvasvika pakuita nyore kuverenga. Asi usatya! Tinokuvimbisa kuti zviri nyore kupfuura zvaunofunga. Semuenzaniso, zvinonakidza kuti iwe unzwisise kuti 3 x 4 vane gumi nembiri. Izvi zvinoreva kuti 12 inodzokororwa katatu, tinogonawo kuti katatu kanodzokororwa kana, zvakafanana.
Kunyangwe ichifadza nzwisisa mashandiro anoita kuwandaMuhupenyu hwako wega, chichava chiyeuchidzo chako icho chichaverenga mhedzisiro yekuwedzeredza kwese ipapo.
1 Kuwedzeredza matafura kubva 1 kusvika 10
2 Ndeapi matafura ekuwedzera?
2.1 Ndezvipi zvakanaka zvakaunzwa tafura yekuwanza?
3 Ungadzidza sei matafura ekuwedzera?
4 Iyo 1 Tafura
5 Iyo 2 Tafura
6 Iyo 3 Tafura
7 Iyo 4 Tafura
8 Iyo 5 Tafura
9 Iyo 6 Tafura
10 Iyo 7 Tafura
11 Iyo 8 Tafura
12 Iyo 9 Tafura
13 Iyo 10 Tafura
Kuwedzeredza matafura kubva 1 kusvika 10
ari matafura ekuwanza anokosha, muhupenyu hwedu hwese tichawana mamiriro apo tinofanira kuziva nekugona kwavari nekusununguka kukuru. Mamiriro akajairika kwatinogona kuawana anogona kuva:
• Kuve nekutenga gumi matikiti yechiitiko chemhuri yako yese uye iwe unofanirwa kukurumidza kuziva mutengo wezvese. Imwe nzira ingangove yekuwedzera zvese zvinowedzerwa imwe neumwe, uye imwe mukana ndeyekushandisa la 1 tafura0 izvo zvaizotipa mhinduro ipapo ipapo.
• Mumwe mamiriro angave ari kuziva peturu yakawanda sei yatichada kusvika kune imwe nzvimbo, kana tichiziva izvo mota yedu inopedza makiromita mashanu. Mune ino kesi taigona kushandisa la 5 tafura seyakanakisa sarudzo.
• Saber zvinhu zvingani zviri mumabhokisi mazhinji kana tichiziva kuti mangani mayuniti ari mune yega yega.
• Ziva mutengo uzere webatch yezvinhu kana tichiziva kuti yakawanda zvakadii.
• Ziva mutengo wemazai gumi nemaviri kana tichiziva kuti rimwe rayo rakakosha chii.
• Kana iwe uine kambani uye uine vashandi 2000 apo vese vari kuzogashira iwo mubhadharo wakafanana, saka kuwanda kuri nyore kunogona kukubatsira iwe kuziva kuti imarii yaunofanirwa kubhadhara kune vese vashandi vako vari mukambani yako. Iwo mashandiro akajairika.
Kune izvi zvese uye nezvimwe zvakakosha kuti uzive zvakakwana tafura yekuwanzaZvakare, zvakanaka kuti uzive zvakanakira kudzidza tafura yekuwanza. Sekuona kwedu, mamiriro ezvinhu kwatiri kuenda kuda tafura yekuwanza yakajairika uye zvakare akasiyana, uye ndosaka kudziziva nekuvaziva zvakadzama chiri chisungo muhupenyu hwedu.
Ndeapi matafura ekuwedzera?
Kugadzirwa kwe matafura ekuwedzera inonzi kune muzivi uye nyanzvi yemasvomhu Pythagoras. Nehungwaru hwakakura, akakwanisa kufungidzira mashandiro eesvomhu aya, kunyangwe hazvo paive pachikoro chePythagorean chakavagadzirisa.
Tafura yekuwanza vaive panguva yavo chimurenga chaicho, sezvo kuvonga kwavari kukuru kwemasvomhu mashandiro aigona kuitwa pasina kuwedzera akawanda manhamba kakawanda.
Kwemakore mazhinji, ese marudzi ematafura uye akateedzana akagadzirwa, mamwe matafura aive matatu manhamba kubva ku3 kusvika 0, asi iwo haana kuwana budiriro yematafura akakosha 999 kusvika 0.
Mu 1642 Blaise Pascal akagadzira otomatiki Calculator yaive rubric yemabasa ekuverenga aya.
Tafura yekutanga yekuwanza, yaive netafura yeCartesian (kana Tafura yePythagorean ) iyo yaisanganisira kujoina bhokisi rimwe nerimwe nerimwe.
Ndezvipi zvakanaka zvakaunzwa tafura yekuwanza?
• Vatengesi vaigona kuita kwavo kutenga nekutengesa mashandiro nekukurumidza zvakanyanya.
• Nyanzvi dzehupfumi nevateresi wenguva yacho dzaigona ikozvino kuita makuru mabasa munguva pfupi.
• Vagari vanogona kuita mamwe mabasa akaomarara ayo akambotora nguva yakareba.
Sezvatinogona kuona, masvomhu uye kunyanya matafura ekuwedzera, pakutanga ivo vakatotanga kuburitsa yavo yekutanga mabhenefiti munharaunda. Panguva iyoyo, kuve nematuru anobatsira zvakadaro yaive chipo chaicho chakaunzwa nesainzi. Nhasi, zvingave zvisingafungidzike kugona kurarama pasina kuwanda matafura, sezvo mamirioni ekushanda anoitwa zuva nezuva panodiwa matafura aya.
Ungadzidza sei matafura ekuwedzera?
Unogona kuvaziva zvese muawa imwe!. Kana ukashamisika maitiro ekudzidza matafura ekuwedzera, Tine mashoko akanaka, zviri nyore kwazvo nehunyengeri ! Uropi hune mhando mbiri dzekurangarira: ipfupi uye yakareba, hunyengeri uhwu hunokutendera iwe kuti udzidze ivo nekukurumidza uye hunogara iwe nekusingaperi. Isu ticha tevera aya matanho anozoita kuti matafura ave nyore kwazvo.
• Chekutanga nhanho. Ngatitorei semuenzaniso iyo 7 times tafura. Uye tiri kuzoverenga zvese kamwechete. Usatombo kendenga kana usinga bate zvese izvi, pakutanga izvi zvakajairika, ngatingo verengei
• Chechipiri nhanho. Tichavhara mhinduro dzese nechidimbu chepepa, pasina kuvhara kuwanda, isu tinongovhara mhinduro dzakadai.
• Chechitatu nhanho. Tichatanga pakutanga uye tichaedza kuziva kuti yakawanda sei 7 × 1, isu tinoti mhedzisiro zvinonzwika uye tinodzikisa pepa kuti riongorore, kana iwe uchinge wawana zvakanaka, ramba uchiwedzera nekuwedzera kwe7 × 2, kana iwe wakundikana unofanirwa kuvhara mhinduro dzese uye dzoka kuti utange.
• Nhanho yechina. Kana iwe ukarova 7 × 2, wobva waenderera uchidzikisa bepa rimwe nerimwe kusvika kumagumo, kana ukarasikirwa unofanirwa kufukidza dzese zvakare uye kutanga kubva pakutanga. Uye saka nematafura ese.
Iyi sisitimu inoshandisa ndangariro yako kuwedzera kutarisisa. Nenzira iyi, uropi hwako huchaita zvese zvaunogona kuti uzive tafura yekuwanza kuitira kuti irege kutanga kubva pakutanga netafura imwe neimwe. Ndokusaka ino sisitimu iri imwe yeayo atinoona seanonyanya kushanda. Panguva imwechete isu tichave tichidzokorora matafura kakawanda uye zvakare, saka chidzidzo chichava chakanyanya kukwana.
Yeye-refu ndangariro imwe yeanoshanda kwazvo. Zvinogadzirwa neichi chiitwa ndechekuti uropi hwako hwakanyatsoteerera, nekuti hwunoziva kuti kana ukatadza uchafanirwa kudzokera pakutanga zvekare. Izvi iwe zvine chekuita nematafura ekuwedzera gumi, uye uchidzokorora nzira yacho kakawanda Isu tinovimbisa kuti mu1 awa iwe uchazoziva zvese!
Iyo 1 Tafura
Iyo 2 Tafura
Iyo 3 Tafura
Iyo 4 Tafura
Iyo 5 Tafura
Iyo 6 Tafura
Iyo 7 Tafura
Iyo 8 Tafura
Iyo 9 Tafura
Iyo 10 Tafura
Zvinyorwa zvinonakidza nezve matafura ekuwedzera :
• Kuwedzeredza matafura kuri nyore masvomhu mashandiro iyo inosanganisira kuwedzera nhamba kakawanda, semuenzaniso 7 × 3 = 21 (izvi zvinoreva kuti 7 + 7 + 7 = 21). Iwo mashandiro akareruka asi panguva imwe chete iwo akakosha kwazvo pahupenyu, nekuti iwe unozoashandisa zvakanyanya.
• Kukosha kwekuziva matafura ekuwedzeredza kwakakosha, mimwe mienzaniso yekushandisa ingangove: kana ndimu yakakosha madhora mashanu uye ini ndikatenga maremoni mana, saka zvese zvinondibhadhara zvakadii? Nebasa remasvomhu 5 x 4 = 5, tinoziva kuti madhora mashanu x 4 mandimu madhora makumi maviri. Iwe uchaita iyi masvomhu mashandiro zviuru zvezviuru muhupenyu hwako.
• Tinofanira kuvagona zvakakwana. Izvo zvakakosha kuti tizvizive chaizvo chaizvo kuti tigone kuve nemhinduro yekuwedzeredza kwega kwega ipapo ipapo, izvi zvichatibvumidza isu kuchengetedza yakawanda nguva neyakabatana masvomhu.
• Kune hunyengeri hwakawanda kuti uzive matafura ekuwedzera, tinokurudzira chinyorwa maitiro ekudzidza matafura ekuwedzera, asi isu tinotsanangurawo zvimwe, semuenzaniso: kana tichiziva kuti yakawanda sei 3 × 4 = 12 iri, tichazozivawo kuti yakawanda sei 4 × 3 = 12 iri, yeuka kuti kuraira hakukanganise mhinduro, nenzira iyi 7 × 3 = 21 uye 3 × 7 = 21. Uku kunyengera kuchakubatsira iwe kuishandisa mune akawanda mashandiro.
• Yakanakisa uye inoshanda nzira yekudzidza kuwanda matafura, inosanganisira kudzokorora tafura imwe neimwe kakawanda, izvi zvichaita kuti urangarire zviri nyore uye kweupenyu hwese.
Zvino zvawava kuziva matafura, nguva yasvika uvadzidzise kweupenyu hwesePane ino webhusaiti tinokupa ndangariro dzekutamba dzinozokubatsira kuti usambozvikanganwa uye nekukurumidza kupindura pese paunenge uchizvida.
Recuerda, que kusagadzikana ndiyo kiyi yekubudirira, kunyange zvazvo dzingaita sedzakaoma, matafura ekuwedzeredza anoda nguva shoma kwazvo yekudzidza zvachose, inongova nyaya yekudzokorora nekudzokorora imwe neimwe yadzo, isu tine chokwadi chekuti masikati iwe unozogona kuzadzisa chinangwa chekuve zvakanyorwa mundangariro dzako kweupenyu hwese.